बल्ल भयो अजोड इन्स्योरेन्सको दोश्रो बजारमा शेयर कारोबार
साउन १८, काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्सको शेयर कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) मा सूचीकृत भएको सातादिनपछि बल्ल आइतवार भएको छ ।
कम्पनीले साउन १३ गतेदेखि कारोबार शुरु हुने गरि गत साउन १२ गते शेयर नेप्सेमा सूचीकृत गराएको थियो ।
सूचीकृत भई कारोबार खुला भएको चौथो कारोबार दिन आइतवार भने उक्त कम्पनीको प्रि–ओपनिङ सेसनमा कारोबार भएपछि निरन्तर कारोबारका लागि बाटो खुलेको हो । प्रि–ओपनिङ सेसनमा उक्त कम्पनीको रू. २९१ मा १३० कित्ता शेयर कारोबार भएको नेप्सेले जानकारी दिएको छ ।
यस दिन रू. २९१ मा खुला मूल्य रहेको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य अधिकतम रू. ३२० सम्म मूल्य पुगेको छ । ११ : ३१ बजेसम्ममा उक्त कम्पनीको ३ लाख ९१ हजार ९२ कित्ता शेयर खरीदको माग छ भने विक्रीका लागि कुनैपनि आवेदन आएका छैन । कम्पनीको शेयर खरीदका लागि प्रतिकित्ता रू. ३२० सम्मको माग रहेको छ ।
उक्त कम्पनीले संस्थापकतर्फको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण तर्फको ३० प्रतिशतका दरको रू. १ अर्ब बराबरको १ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत गराएको छ । नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि रू. ८७ देखि रू. २९१ सम्मको सीमा प्रदान गरेको थियो ।
बैतडीमा गर्भवती महिलासहित ३२१ जनामा कोरोना पुष्टि[२०७७ सावन, २६]
नवकिरण लघुवित्तको विशेष साधारण सभा भदौ ९ मा [२०७७ सावन, २५]
११.३० अंक बढ्यो शेयर बजार, ९७ करोडभन्दा बढीको कारोबार* [२०७७ सावन, २५]
आरएसडिसी लघुवित्तको नाफा २२% वृद्धि[२०७७ सावन, २५]
१३७८.२२ विन्दुमा नेप्से, कारोबार रकम ६९ करोड (२ बजेको अपडेट)[२०७७ सावन, २५]
बैतडीमा गर्भवती महिलासहित ३२१ जनामा कोरोना पुष्टि